Xasan Sheekh oo sheegay in Madaxweyne Farmaajo rabin doorasho ka dhacda dalka - Awdinle Online
Xasan Sheekh oo sheegay in Madaxweyne Farmaajo rabin doorasho ka dhacda dalka
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hoggaanka waqtiga muddo xileedkooda uu dhamaaday ee dowladda Federaalka ay ku fashilmeen inay dalka ka dhacdo doorasho.
Xasan Sheekh oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxaa uu sheegay in Farmaajo uusan xilligaan xalka qeyb aheyn, hayeeshee uu qeyb ka yahay mushkilada dalka kajirta.
Waxaa uu sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo Afar sano ah uu dalkaan maamulayay, sidoo kalena aysan jirin cid heysatay xilkiisa , balse markii uu dhamaaday muddo xileedkiisa aysan ka aqbaleyn in uu sii joogo.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si cad u sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday uusan dooneyn in dalkan ay ka dhacdo doorasho.
Hadalka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kusoo aadaya xilli Midowga Musharixiinta oo uu kamid yahay ay ku dhawaaqeen banaanbax looga soo horjeedo farmaajo, kaas oo ay iclaameen in uu dhacayo 19-ka Bishan oo ku beegan Maalinta jimcaha ah.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo Banaanbax kaga dhawaaqay Muqdisho
Next articleRW Rooble oo Magacaabay guddiga qabsoomida shirka wadarashiga doorashooyinka